आचारसंहिता उल्लघंन गर्नेलाई कारबाही हुन्छ (जितबहादुर शाह)
माध्यमिक शिक्षा परिक्षा (एसईई) आजदेखि सुर्खेतसहित देशभर सञ्चालन हुँदैछ । सुर्खेतका विभीन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा रहेका ३० वटा परिक्षा केन्द्रमा एकैसाथ परिक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् । परिक्षालाई मर्यादित बनाउन के के गरिएको छ त ? प्रस्तुत छ जिल्ला शिक्षा अधिकारी जीतबहादुर शाहसँग करिश्मा चौधरीले गरेको कुराकानीः।
प्रस्तोताः माद्यमिक शिक्षा परिक्षालाई मर्यादित बनाउन जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतले के के गरेको छ ?
अतिथीः माद्यमिक शिक्षा परिक्षालाई मर्यादित, ब्यवस्थित र अनुशासित एवम् न्यायोचित बनाउनका लागि केन्द्राध्यक्ष हरुलाई अभिमुखिकरण गरिएको छ । अनुगमनको पनि प्रभावकारी ब्यवस्था मिलाएका छौँ । अनुगमन गर्ने क्रममा क कसले केके आचारसंहिता लागु गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा ३७ बुँदे आचारसंहिता बनाएर परिक्षा केन्द्रमा पठाएका छौँ । परिक्षा केन्द्रमा पनि केन्द्राध्यक्षले सबै सरोकारवालालाई भेला गरेर ध्यान दिनुपर्ने कुराका बारेमा जानकारी गराउनुभएको छ ।
कुनैपनि कुरामा दुविधा छैन सबै हुने कामहरु पुरा तयारी छ । विगतमा पनि यो जिल्लामा मर्यादित ब्यवस्थित रुपमा परिक्षा सञ्चालन भएका हुन् । र यो वर्ष पनि अँझै मर्यादित र ब्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।
प्रस्तोताः आचारसंहिता उलंघन गर्नेलाई के गर्नुहुन्छ ?
अतिथीः कतिपय कुरा नियम कानुनमा उल्लेख भएको छ । अव उनिहरुलाई ६ महिना कैद पनि हुन सक्छ । जरीवानाको ब्यवस्था पनि छ । शिक्षा ऐनमै त्यस्तो ब्यवस्था छ । यदि कुनै निरिक्षक बाट बदमासी हुन्छ भने उ निस्कासित हुन्छ । निस्कासित मात्र होईन, निरिक्षक हुनेको कुनै सामुदायीक संस्थागत विद्यालयको शिक्षक पनि हुन्छ र त्यो शिक्षकलाई हामीले शिक्षक भएको हिसाबले नै कार्वाही हुन्छ । र अँझै जघन्य प्रकारको कुरा रहेछ भने त्यही अनुसार कार्वाही हुन्छ ।
प्रस्तोताः पहिला प्रवेशिका परिक्षा भनिन्थ्यो अहिले माद्यमिक शिक्षा परिक्षा भनिन्छ यसमा केही फरक छ ?
अतिथीः परिक्षा उहि हो नाम फरक भयो । अब के भयो भने माद्यमिक शिक्षा उत्तिर्ण परिक्षा भनेर कक्षा १२ लाई भनिने भयो । किनभने अब १२ सम्म माद्यमिक विद्यालय भयो । किनभने माद्यमिक विद्यालय उत्तिर्ण भनेको त अब १२ कक्षा उत्तिर्णलाई मात्रै मान्छ । पहिले १० कक्षा उत्तिर्ण गरिसकेपछि नै माद्यमिक शिक्षा उत्तिर्ण हुने भएकाले १० कक्षालाई नै एस एलसी भन्थ्यौँ । अब ११, १२ पढेपछि मात्रै हुने भएको हुनाले त्यो एसएलसी १२ मा जाने भयो । र पहिलेको एसएलसीलाई नियमित गर्नका लागि यसको नाम के राख्ने भन्दाखेरी यो माद्यमिक शिक्षाकै परिक्षा हो भनेर माद्यमिक शिक्षा परिक्षा एसईई भनेर नामाकरण गरिएको हो ।